NUSOJ oo ku eedeysay Bar-Kulan in ay ku xadgudubto xaquuqda shaqo ee suxufiyiinta – SBC
NUSOJ oo ku eedeysay Bar-Kulan in ay ku xadgudubto xaquuqda shaqo ee suxufiyiinta
Warbixin dheer oo uu soo saaray ururka qaranka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa lagu cambaareeyay idaacadda Bar-Kulan taasi oo la sheegay in ay ku sameeyeen dhimis xad ka bax ah mushaarada shaqaalaha ay qaataan in ka badan 50 boqolkiiba.
Ururka NUSOJ ee u dooda xuquuqda Suxufiyiinta ayaa sidoo kale waxaa uu tilmaamay in wariyaasha ka howlgala magaalada Nairobi ee u shaqeeya Bar-Kulan aysan badankood haysan waraaqaha waaxda socdaalka dalka Kenya ee lagu shaqeeyo taasoo ka dhigeysa suxufiyiinta ka shaqeysa idaacada kuwa sharci la’aan shaqeeya, waa sida lagu xusay warkan ka soo baxay NUSOJ..
Warbixintan ayaa waxay farta ku goday in suxufiyiinta la weydiiyo qabiilka ay yihiin marka shaqada loo qorayo taasoo ay aad u dhibsadeen suxufiyiinta shaqada ka doonayo idaacadani. NUSOJ waxay sheegtay in lacagaha laga gooyo mushaarka ay qaataan suxufiyiinta aysan u cadeyn suxufiyiinta ayna aad u fara badan tahay.
Xoghayaha Shaqada ee NUSOJ Axmed Max’ud Max’ed Shaam ayaa tibaaxay in ay warbixintani tahay mid uu ururka NUSOJ ku doonayo in uu ku xureeyo suxufiyiinta xaqooda lagu tumanaayo. “Tani waxay qeyb ka tahay dadaalka aan ku dooneyno in aan ku xureyno suxufiyiinta loo diiday in ay hadlaan oo ay xaqooda sheegtaan” ayuu yiir Axmed Shaam.
Xoghayaha Shaqada ee NUSOJ waxaa uu si toos ah uu farta ugu fiiqay in dad gaaraya 11 suxufi laga racdeeyay Bar Kulan ama lagu qasbay in ay ka tagaan shaqada kadib markii mushaaraadkoodii si xad-dhaaf ah loo dhimay
Axmed Shaam waxaa uu sheegay in ururka NUSOJ uu u dagaalami doono soo dhicinta xaqqa ay leeyihiin suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo aysan ku tuman karin shaqsiyaad ajnabi ah.
NUSOJ waxay kasoo horjeesatay in suxufiyiinta ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya aan la siinin contract-yo ay ku shaqeeyaan si ay xaqooda ugu sheegtaan idaacada Bar Kulan.
Docda kale maamulka idaacadaasi gaar ahaan agaasimaha Steve Turner oo wareysi siisyey Idaacada BBC-da qaybteeda Soomaaliga ayaa iska fogeeyey eedeynta uga timid ururka NUSOJ, isagoo ku tilmaamay inaanay waxba ka jirin qoraalada laga soo saaray Idaacada ee la xiriirka ku tumushada xuquuqda Shaqaalaha.
Warbixintan oo nuqul ka mid ah SBC la soo gaarsiiyey ayaa iyadoo dhameystiran waxaad ka daalacan kartan